किन पेरिस उभरियो र खतरनाक छ | सडकको लागि एक युगल
जुलाई 6, 2018 / 10 टिप्पणिहरु
यो अब हेमिंगवे पेरिस छैन।
अब त्यो रोमान्टिकृत प्रजाति क्लिंकिंग च्याम्पियन चश्मे र क्याना-क्यान्सर, ब्याटललिटको मिठाई सिगार र ईश्वरीय रोशनीको साथमा। जहाँ सुन्दरता बढ्यो, हामी थाहा छैनौं; सम्भवतः समय र विषाणुको भाग्य, वा पुरानो प्रतिमानमा शहरको निर्भरताको लागी कि वर्तमान जनसंख्या संग काम गर्दैन। पेरिस हामीले व्यक्तिमा अनुभव गरेका थियौ, मस्सी, प्यारेल्लभ तस्बिरहरू भन्दा धेरै फरक थियो। हाम्रो लागि, यो आफैलाई आत्म-धर्मी, खराब खराब कदमको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो जुन यो एक पटक थियो - थकित, असफलता र विच्छेदन।
यो ती घमण्डी, पेरिसको डबल-बोल्ने समीक्षाहरू होइनन् जुन सुन्दरता र अन्त्यमा शहरको विशिष्टता समाप्त हुन्छ। मलाई ईमानदार हुनुपर्दछ। साथै, यदि तपाइँ Eurostar मार्फत वा सामान्य रूपमा गियर डाउ नर्डमा रेल स्टेशनमा पेरिस भ्रमण गर्ने यात्रामा योजना राख्नु हुन्छ भने, कतिपय काम गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईलाई कस्तो आशा छ कि तपाइँ सुरक्षित र आनन्द महसुस गर्न चाहनुहुन्छ भने आफैँ, केही घण्टाको लागी पनि।
मलाई थाहा छ त्यहाँ लाखौंहरू यस शहरमा विभिन्न अनुभवहरू छन्, तर पहिलो पटक आगन्तुक (जस्तै धेरै व्यक्तिहरू) व्यक्तिगत र वास्तविक तस्विर चित्रण गर्न महत्त्वपूर्ण छ त्यसैले अन्य पहिलो-टाइमरहरू तिनीहरूका भित्रमा छाड्नका लागि तयार हुन सक्छन्। लाइट्स शहर!
हाम्रो पेरिस अनुभव
हाम्रो भ्रमणको क्रममा हाम्रो मुख्य लक्ष्य सम्भव छ कि धेरै आकर्षणहरु को लागी केहि घण्टा को लागी शहर को हृदय मा फिट थियो। त्यसोभए, निष्पक्ष हुनुहोस्, हामी विचलित पेटी-रेखांकित सरस्खलन हेर्न वा कफी घरहरू टाढा टाढा टाढा टाढा टाढा टाढा टाँस्न सक्दिनन्। हामी उपलब्ध भएको कम मात्राको कारणले हामी उद्देश्यको साथ गएका थियौँ, पर्यटकहरूको अनुभव धेरै अन्य जस्तै: कला, इतिहास, सिङ्गसँगै हिँड्ने र केही चश्मेको रातो रक्सी। हामीले के सबै चीजहरू भेट्ट्यौं, तर अप्रत्याशित तरिकामा।
एफिल टवरको एक अप्रत्याशित दृश्य।
ट्रेनबाट गियर डाउ नर्डमा मध्य-बिहान आगमन लन्डन , हामी पैदल यात्रीहरु को एक समुद्र मा जाने को लागी, आशा गर्न को लागी। भीडको बावजूद, हामीले मेट्न सकेनौं कि हामीले के सोचेका छौ कि शहर वरपर हाम्रो बाटो हुनेछ - मेट्रो को लागि टिकट मिसिन। धेरै कम यूरोको सिक्काहरू र प्रायः बिलहरू, हामी पत्ता लगाउन निराश छौं कि यो प्रत्याशित किओस्कले पहिले पूर्व स्वीकार्नुअघि नै समान मनपर्ने पर्यटकहरूको पछि एक लामो लाइनमा पर्खाइरहेको छ। केहि पैसा आदानप्रदान पछि, हामीले दुई मेट्रो टिकट खरीद्यौं। हामीले भर्खरै हाम्रा आदान-प्रदान सिक्का सुरक्षित गर्नुपर्दछ।
द्रुत नोट: शहरको धेरै अन्य ठाउँहरू जस्तै गारे डु नर्ड, तपाईंलाई एक चोटि एकपटक आगमनको कोठामा प्रयोग गर्न चार्ज गर्दछ, त्यसैले यो सिक्का यूरो सिक्किङको जेब पनि यो उद्देश्यको लागि काम गर्दछ।
मृगौला नै ईमानदार हुन थालेको थियो, सबै भन्दा भीड र सरदार मध्ये एक - हामी अन्वेषण देख्न सक्छौं जुन हामीले कहिल्यै अनुभव गरेका छौं। अतीतमा के 11AM को आसपासको भीषण घण्टा विचार गर्दथ्यो, मानिसहरूले आफैलाई जनावरहरू जस्तै अज्ञात, graffiti-littered train cars मा प्याक गरे र उनीहरुलाई छनौट गर्ने कुनै पनि गन्तव्यमा टाँस्न थाले। सामान्य धक्का र भीडको पुलको साथसाथै मद्दतकारी चिन्हको कमी (हामी दुवै फ्रान्सेलीको नजिक पुग्नको लागि पर्याप्त बोल्छौं ... यो भाषा भन्दा धेरै गम्भीर दिशात्मक चिन्ह) थियो, हामी वास्तवमा जनतामा सामेल हुनको लागि हाम्रो योजना त्याग्यो। र फ्र्रो भूमिगत रूपमा र मुख्य स्टेशन गेटबाट बाहिर निस्क्यो, शहरलाई पैदल हिड्ने आशा गर्दै जस्तै हामीले अन्य प्रमुख शहरहरूमा धेरै पटक गरेका थियौ।
गारे डाउ नॉर्डको बाहिरको पेरिसियन ब्रुडर्ड्सहरूमा हाम्रो पहिलो अनुभवको लागि हामी स्वागत भएमा मैले केवल आठ आठ वर्षीया बालबालिकाहरू क्लिपबोर्डमा राखेका थिए, आक्रामक रूपमा हामीलाई "साइनका लागि पैसा" बोझ गर्न साइन अप र प्रतिज्ञा गर्न आग्रह गरें। जब हामी राजनीतिज्ञले इन्कार गर्यो र उत्प्रेरित हुनुभयो, न केवल तिनीहरूले जस्टिनको ब्याक जेबको लागि मात्र पुग्थे (हामी हाम्रो कागजात कम बट्टा हाम्रो कमर प्याकहरूमा जान्थ्यौ), तर चोरी गर्न केहि पनि भेट्टाउन पछि तिनीहरू चिच्याउँथे र हामी तल घुमाए जस्तै सडक पेरिस ओपेरा हाउस को खोज मा। जाडोमा, शहरका नियमहरूले ती व्यक्तिहरूका लागि अनुमति दिन्छ जुन चोरी, पनडुल्लिंग, र मनपराउँदछ, धेरै थोरै पछाडिको साथ। विवाहित हुनुहोस्!
द्रुत नोट: तपाईंको पासपोर्ट, पैसा, रेल टिकट र कुनै अन्य कागजातहरूको प्रयोगमा कमर प्याक त्यो अगाडि तपाईंको शर्ट अन्तर्गत टकराएको छ। पनी पेकेटिंग पेरिसमा यति धेरै हदसम्म छ कि तपाइँ लुभ्वेको प्रवेशमा यो सजग हुन संकेतहरू पनि छन्।
व्यक्तिगत वस्तुहरू तपाईंको जेबमा जहाँ पनि पेरिसमा राख्नुहोस् - लुभेर पनि होइन!
हाम्रो पहिलो स्टप (एरिरी र पेरिसको स्टिलेड्राडको क्षेत्रबाट टाढा हिंड्नु पछि) पछि ग्यालरी लफायेटको ग्यालरी लफायेटको अन्त भयो, जहाँ हामीले विचलित रेस्टुरेन्टमा ठोक्यौं। हामीले हाम्रो पहिलो आधिकारिक रोकिएको बिन्दु हुनुपर्दछ। र बटुआ-हानिकारक बच्चाहरु द्वारा हल्का हिसाबले आक्रमण गरिरहेको छ, हामीले पिउने सोचेका छौ वा दुईले हाम्रो प्रारम्भिक अनुभवको स्वादमा मद्दत गर्न सक्दछ!
हामी मेजबान द्वारा गहिराई देखि स्वागत र सडक को अनदेखी विंडो द्वारा बैठे, जो दिन को हाम्रो गठन को अपेक्षाहरु को एक स्वागत रिव्यू थियो। खानाको रूपमा उत्कृष्ट थियो र दाखरस थियो। उत्कृष्ट हुन सक्छ कि गुणवत्ता मा, तर यो पनि दीन को विरुद्ध वा तापक्रम उपस्थिति र शहर को गंदगी। दुर्भाग्यवश, यस तथ्यको बावजुद हामीले फ्रेन्च गर्दा बोल्दा (र रेस्टुरेन्टमा सबै व्यस्त थिएन) बाहेक, भित्री विदेशी दर्शकहरु बाट स्पष्ट रुपमा थकित भए र हामीले हाम्रो टेबलमा भाग लिनु भन्दा बढी थिएन चेक। सौभाग्य देखि खाना यसको लागि बनाइयो! हामी एक राम्रो बनाएको रविलोली डिश विभाजित गर्छौं र साढे चार चियाहरु को शङ्कामा अगाडी हिड्नु भन्दा अगाडी सडकमा जान्छौं।
द्रुत नोट: यदि तपाइँ यूएसका हुनुहुन्छ भने तपाईले समग्र ट्याबको माथि 15-20% tipping गर्न प्रयोग गर्नुहुनेछ। हामी अझै युरोपमा टिप गर्छौं तर एक देखि तीन यूरो आदर्श हो, जब सम्म तपाई कम कम रेस्टुरेन्टमा हुनुहुन्न, जहाँ ट्याबको 5% अनुकूल छ। कुनै कुरा के हो भने, यदि तपाईंको सेवा राम्रो छ भने, तुरुन्तै महसुस गर्न टिप गर्न निश्चित गर्नुहोस् उपयुक्त छ!
पिक-जेब हुन सकेन मुस्कुराउन!
मलाई आशा थियो कि हाम्रो अगाडी हिँडेर सुन्दर ओपेरा नेशनल डे पेरिस तिर बोल्वार्डले मेरो खराबीलाई कम गर्नेछ, तर दुर्भाग्यवश यो पेरिसको एक सुन्दर हृदयको अर्को अनुहारमा असाध्यै सुन्दर दृश्य थियो। ग्लोरेरिया भरमा मुख्य बाटोमा दिनको एकदमै व्यस्त समयको दौडान, एक बेघरले आफ्नो थकान, एक कम्प्लेट, साथै एक बिरालो र सानो कुकुरको छेउमा सोधे। जाहिर छ, कुनै पनि प्रमुख शहरमा हामी कम भाग्यशाली र वास्तविकताको सामना गर्छौं बिना खाना र आश्रयको लागि, यो एक विश्वव्यापी सत्य हो र एक छ कि हामी सहयोग गर्न को प्रयास गर्छौं, यदि र हामी। यस विशेष उदाहरणमा समस्या थियो, यस मानिसको अगाडी सडकमा जनावरहरू वास्तविक थिए तर स्पष्ट रूपमा जीवित थिएनन्।
म ईमानदारीपूर्वक बहस गरें वा यो लेख्न को लागी छैन, किनकि एक पशु प्रेमीले मलाई यति धेरै बिगारेको छ कि मेमोरीको टाउकोमा मलाई क्राइन् (कम्तिमा भन्न भन्नुपर्दछ) र आशा गर्दछ कि मैले के देखेको एक भ्रम थियो, तर हामीले देख्यौं यो, र दुर्भाग्यवश, यो थिएन। म कुनै समाजलाई यो घृणित प्रदर्शनलाई बुझ्न सक्दैन, र विशेषगरि जसले आफैंलाई "ब्रह्मपन्थी" को रूपमा पेरिसको रुपमा प्रस्तुत गर्दछ। मैले मेरो लंच गुमाउनु अघि हामी हिंड्यौं।
हाम्रो पछि लाग्न, यसका लागि, हामी निश्चित गर्न पेरिस ओपेरा हाउस, एक सुन्दर संरचनाको उद्देश्य स्थानमा भयो। त्यहाँ प्रवेश गर्ने कदमहरू सँगै बसेर मान्छेहरु को एक चापलूसी थियो, र धेरै राम्रो फोटो ओप्स थियो, तर हामी वास्तव मा इमारत को दौरा गर्न को लागि एक रास्ता खोज नहीं पाए। हाम्रो पहिलो पटक त्यहाँ रहेको, मलाई निश्चित छ कि यो प्रयोगकर्ता त्रुटि थियो, स्वीकार गरेर, तर हामी समय-क्रक भएको थियौं र कहिलेकाहीँ पर्यटक पर्यटक साइटहरू हेर्न चाहन्छौ।
हाम्रो दिन को केवल आराम - हॉप-ऑन हप-अफ।
ओपेरा चरणहरू रोक्न पछि, हामी सौभाग्य देखि धेरै मध्ये एक फेला पर्यो हजुरआमाले भने त्यो सडकमा बस रोकिएको थियो। यो गर्नको लागी दौडिँदै (तपाई आफैं बसमा टिकटको लागि तिर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन जान आवश्यक छैन), हामी बोर्डमा पुग्न ट्राफिकको पागल भागमा डुब्यौं। यो दिनको लागि हाम्रो सुरक्षित अनुग्रह थियो!
तुरुन्त टिप्स: पेरिसमा हप-ऑन-हप-अफ बसहरू उठाउँछन् र शहरको हृदय वरिपरि धेरै गन्तव्यबाट बाहिर निस्कन्छ। तपाईंको लागि उत्तम छ कि फेला पार्नुहोस् र सुविधाको फाइदा लिनुहोस्! यसले हरेक गन्तव्यबाट हरेक 15 मिनेटको बारेमा छान्नेछ ताकि तपाईं आफ्नै गतिमा जान सक्नुहुन्छ।
यो सहरको बस भ्रमणले तपाईंलाई पेरिसको मुख्य बिन्दुहरूमा ल्याउँछ। हाम्रो पहिलो स्टप ईफेल टावरको छेउमा कार्सेल थियो। त्यहाँ ड्राइभमा शहर र नदी विचार सुन्दर छ, र कारसेल आफैले एक अवशेष हो जसले तपाईंलाई त्यस्ता त्यस्ता उत्सवका लागि पेरिस क्यान्सर दिन सक्दछ। त्यहाँ जाडोमा हुनु भएको थियो, तथापि, यो टाढाको बहावबाट बचाउनको लागि यस विशेष आकर्षणको लागि बसमा बसिरह्यो (वास्तवमा, तर यो धेरै धब्बा थियो)।
अर्को मुख्य आकर्षण उत्थान थियो आइफिल टावर आफ्नै। यो एक प्रभावशाली संरचना हो, यो रेखाहरु र इतिहास को लागि अनन्त सुन्दर छ, र व्यक्तिगत रूप देखि आश्चर्यजनक गहिरो गहिरो ताँकारो रङको रंग को लागी आश्चर्य छ - मैले मलाई तस्वीरहरु मा सही ढंग देखि चित्रित नहीं गरेको छ! गर्मीको महीनाको समयमा म उत्सुक थिएँ कि बस तल तल तल लानको अनुभव एक बागेट संग र शराबको बोतल पेरिसमा टिकटको मूल्यको मूल्य हो, तर जाडोमा ... यो धेरै भन्दा सुन्दर देखिन्छ। यसको भ्रमण गर्दा लाइनमा बितेका घण्टाहरू पनि, त्यसैले हाम्रो लागि कार्डहरूमा थिएन। तर, केवल सर्दिया आकाशको पृष्ठभूमिको विरुद्धमा हेर्नको लागि र यसको अनुभव थियो।
त्यो राम्रो तरिकाले कि इफेल टावरको अनुभव प्राप्त गर्न हामी शहरमा हाम्रो समय दिन सक्छौं, हामीले दौड बस क्षणमा आर्यो र हल्का बहादुर बन्छौं र चलचित्रमा आधुनिक इतिहासमा यसको कचौरा खिच्नुहोस्। त्यो क्षणको रोमांस अचानक बाधा भयो, दुर्भाग्यवश।
एफिफ टवर अझै पनि वातावरणको बावजूद, हेर्नको लागि एक नजर हो।
जब यो हाम्रो भ्रमण बस अर्को अर्को पछाडी छोड्नको लागि समय थियो, जस्टिन पहिले देखि नै बसेको थियो, तर जब मैले बसमा फर्कन खोजे, चालकले मेरो हातमा ढोका बन्द गर्यो र बन्द गरिसकेको थियो। सौभाग्य देखि, जस्टिन - साथ नै अन्य यात्रुहरु - उसलाई समस्या पर्यो र उनले ढोका खोल्न बन्द भए त्यसैले म सडक घुमाउन सकेनन्। Yikes। ह्यान्डलाइटमा यो मेरो लागि एक मजेदार मेमोरी हो, यद्यपि समय मा केहि बिर्सने छैन! सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं चालकलाई राम्रो तरिकाले सजग गर्नु अघि तपाइँ ह्याप्प फिर्ता गर्नु हुन्छ!
अर्को हप-अप हाम्रो लागि प्रसिद्ध पन्ट डेन आर्ट्समा सुरु भयो, लुभरेको सडकमा, जुन प्रसिद्ध "प्रेम ताला" को स्थान हो, जहाँ स्थानीय र दर्शकहरूले पुलको छेउको ढाँचाको संरचनामा ताला लगाए। अब सुरक्षा कारणले गर्दा दोषी कारणले गर्दा हामीले ठूलो लुगा र स्पर्श प्रदर्शन देख्न सक्नु अघि हामीले लुभ्रेको बाटो बनायौँ।
जब ठूलो र राम्ररी थाहा छ, यदि तपाईं खोजी गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने लव्वेन्ट मुख्य सडकमा हिडेर पहिलो पल्ट आगन्तुकको रूपमा तपाईंले आफैलाई उलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो प्रसिद्ध मुख्य प्रविष्टि मार्गको बीचमा रहेको छ र लुकेको छ। हेर्नुहोस् यदि प्रेम ताले पुल बाट हिंड्नु पर्छ। त्यहाँ हिड्ने क्रममा हामीले स्थानीय रोक्न र सोध्नुभयो (फ्रान्सेलीमा) लुओभर थियो जसको निर्देशन थियो, र उनीहरूको जेनिस्टिक र अनुकूल प्रतिक्रियाको साथ खुसीसाथ चकित भयो; उनको सहायक आचरण बगाव को बावजूद हाम्रो दिन को चमक भयो। सम्भवतः यो केवल जान्छ कि यदि तपाईं पेरिसको लाइटको खोजी गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई अन्त्य गर्नुहुनेछ!
लुउरे संग्रहालयमा एक साँघुरो प्रवेश छ। हाम्रो यात्राको दिन पछि यो ढाँचाको कुनामा कुच्याउन एक स्वागतजनक दृश्य थियो र ती त्रिभुजका गिलास डोमहरू हामीलाई प्रवेश गर्न bckoning हेर्नुहोस्। केवल बाह्र यूरो को लागी, तपाईं नाना Mona Lisa न केवल अनुभव गर्न सक्छन्, तर Venus de Milo, प्राचीन ग्रीक मूर्तिकला को सबै भन्दा प्रसिद्ध कामहरु मध्ये एक।
मूर्ति, प्राय: सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक छ, यति धेरै नजिक छ जस्तो लाग्छ तपाईं यसको मूल समय मा पुरातनता हेर्दै हुनुहुन्छ। मोना लिसा, जबकि सबैभन्दा प्रसिद्ध, वास्तवमा धेरै मानिसहरू भन्दा अपेक्षाकृत सानो छ! गिलास र रेलिङ बाधा (प्रतिबिम्बित) पछि प्रतिबन्धित, यो चित्रकारी अझै सुन्दर दृश्य हो। यी सबै भन्दा प्रसिद्ध कामहरु को अतिरिक्त, लुवरे को खजाने, अस्पष्ट, र शहर मा हाम्रो दिन को पूर्ण प्रकाश।
द्रुत नोट: लुभरेमा ठूलो भीडको साथसाथै संग्रहालयमा सुविधाहरूमा लामो लाइनहरूको अपेक्षा राख्नुहोस्। म सामान्यतया एक संग्रहालय अनुभवको यो विशेष पक्षको उल्लेख गर्दैन, तर यदि तपाई नयाँ आगन्तुक हुनुहुन्छ भने, यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि विश्रामघरहरू त्यहाँ छैनन् (म यो कसरी राख्दछु) आधुनिक। त्यहाँ भ्रमणहरू र बसहरूबाट घनिष्ठ पर्यटकहरू छन् र लुभेरसँग पर्याप्त विश्रामस्थल छैन जब व्यस्त हुन्छ, विशेष गरी महिलाहरूको लागि। केवल एक छिटो टिप!
सानो मोना लिसालाई नमस्कार गर्दै
हामी लुभ्रे भ्रमण गरिसकेका थियौँ, हामी लन्डनमा फिर्ता पुग्यौं हाम्रो गाडी फिर्ता गियर डाउ नर्डमा पुग्यौं। हप्प-ऑन-हप-अफ भ्रमण हामीले प्रयोग गरेका थियौं केहि कारणका लागि समय पुग्न सकेन, त्यसैले हामीले स्थानीय बसलाई रेल स्टेशनमा समात्न जाने निर्णय गऱ्यौं किनभने उनी लुउभरको राउन्डअबाउटबाट फर्किए। सौभाग्य देखि, चालक अत्यन्त उत्कृष्ठ थियो र हामीलाई बस पछि दौडिरहेको देखे! उहाँले हामीलाई अर्को स्थानको लागि छोड्नुभयो, हाम्रो राहतको लागि धेरै र हामीलाई आठ भन्दा बढी यूरोको लागि छोडिदिनुभयो, हामी मित्र मान्छे संग एक स्वच्छ बस मा स्टेशनमा फर्कन सक्षम भयौँ।
त्यसोभए हामी सहरमा बसोबास गरिरहेका थियौँ। हामी सबैजनाको घरमा पुग्यौं। हामी त्यहाँ पुग्यौं। हामी त्यहाँ पुग्यौं। हामी त्यहाँ पुग्यौं। हलचल सडक।
पेरिसमा हाम्रो अन्तिम ग्लास वाइन
गारे डाउ नर्डको लागी अर्को फ्रांसीसी-उनीहरूको रेस्टुरेन्ट थियो जुन क्रेप र शराब सहित पूर्ण मेनु प्रदान गरिएको थियो, पहिलो पटक हामी आगन्तुकको विशिष्ट आशाहरू जस्तै। हामी त्यसोभए बुझेका थियौं र गिलासको साथमा हाम्रो घाँटीमा घाम लाग्यौं रक्सी, त्यसोभए हामी भित्र पियौं। सेवा बेजोड र अनुग्रहसाथ समायोजन थियो। लामो दिनको अन्त्यमा यो एक स्वागत परिवर्तन थियो - एक अनुकूल सर्भर र सञ्झ्यालको छेउको टेबल एक विचित्र कुनामा ठिक्यो। हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नु अघि खाना र धेरै गिलास रक्सीको आदेश दिएका छौं। हाम्रो हम र पनीर क्रेप गहिरो र न्यानो थियो, र हामीसँग केहि सुरुवात गर्न को लागि केहि घर रातो दाखरस थियो - निस्सन्देह! पर्ख कर्मचारी सार्थक थियो र समझदारीले पर्यटकहरूलाई प्रयोग गर्यो, अंग्रेजी र फ्रांसीसी बोल्ने। र, साँझ व्यस्त व्यस्त भए तापनि तिनीहरूले हाम्रो लागि हाम्रो तस्विर लिने प्रस्ताव गरे (तिनीहरूमध्ये धेरै, यो धेरै राम्रो थियो भनेर सुनिश्चित गर्न) हाम्रो धेरै लामो दिनको अन्त्यमा दस्तावेज गर्न!
पेरिसमा 8 घन्टा एक पेय गर्न ड्राइव गर्दछ।
प्रभाव कहाँ आशा हुन्छ
शान्त, वर्षा, सडक मा छाता को बिरुद्ध रोशनी। आशा यो शहर हो कि एक सानो मोना लिसा भन्दा बढी र स्वादिष्ट प्लेट छ तर चाँडै सिर्जना गर्न सकिन्छ कि नुस्खा समय र बर्बादमा हराएको छ।
क्याफेमा न्यानो सिट टूर बस विन्डो मार्फत आशाजनक नजर अब छ चलने योग्य फेस्ट त्यो नयाँ पेरिस हराएको छ।
त्यहाँ पेरिस अझै सम्झना र पुन: घोषणा गर्न धेरै छ। यो कलाकारले बारम्बार बार्सिलोना र भित्तामा भत्काइदिएपछि यो पनि कहिलेकाहीँ अघि बढ्न सकेन, तर यो दिनको अन्त्यमा यो अनूठा प्रतिभा हो बेवास्ता गर्दछ। गुलाब रङ-चश्मा-आदर्शहरू जुन हामीले देखेका थियौं, त्यो कुरा बुझ्न को लागी पेरिस सच्चाईमा जडित छैन र हृदयमा घुम्न मन पराउँछन्।
यो ला रहन एन गुलाब रहनेछ, तर गुलाबी ज्योति कहिले फिर्ता हुनेछ?
श्रेणी: युरोप, फ्रान्स, सर्वाधिक लोकप्रिय, समीक्षा, यात्रा योजना टैग: arc, गियर डु नेर्ड, louvre, मोना लिसा, पेरिस, भेनस, रक्सी
← नि: शुल्क र सस्ता कुराहरू बार्सिलोनामा गर्न
तंत्रिका फ्लायर? तपाईंको उडान भन्दा पहिले अशांति पूर्वानुमानहरू फेला पार्नुहोस् →
10 टिप्पणिहरु "8 घण्टा पेरिसमा: ए कच्चा समीक्षा"
म पेरिसको प्रशंसक थिएन। यो गहिरो थियो, खराब गल्ती भयो, र मान्छे धेरै अशिष्ट थिए! मलाई यकीन छ कि अरूहरू अझ राम्रो अनुभव हुनेछ तर मैले गरेन। मलाई खुसी लाग्यो कि तपाईंले पिक-जेबिंग समस्याहरू बताउनुभयो! तपाईं कहिल्यै के भयो भनेर अनुमान गर्नुहुन्न! मैले मेरो सबै चोरी पैसा तिरिदिएँ र मेरो फोन मेरो सट्टाबाट। धन्यबाद मैले मेरो पासपोर्टमा राखेँ (घुमाउरो उच्च माईन) को लागि निश्चित गर्न मैले यो गुमाएको छैन। मेरो पति अचानक थियो। उनले मूलतः त्यसपछि र त्यहाँ भन्यो भने, हामी कहिल्यै फर्किंदैनौं। मलाई हेर्न खुसी लाग्यो तपाईं यति धेरै अन्य यात्रुहरु जस्तै शंकु कोट छैनन।
आह, बूट मा पासपोर्ट ले pickpocketers को आसपास एक अन्य उत्कृष्ट चाल छ! राम्रो कल!
म धेरै खुसी छु कि तपाईं पेरिसको बारेमा ईमानदार हुनुहुन्छ !!! मैले त्यहाँ त्यहाँ त्यहाँ राम्रो भएन - सौभाग्य देखि। तर रेलहरू (तपाईंले तिनीहरूलाई पूर्णरूपमा वर्णन गर्नुभयो) विनाशकारी, भित्तामा भरिएको छ, र पिक-जेब हास्यास्पद छ! म भन्न सक्दिनँ कि मैले पेरिसको लागि मायालु वा हेरचाह गरें। घृणा नगर!
म खुसी छु, म सहमत छु, Meagan! मलाई निश्चित छ कि धेरै मानिसहरूले यसलाई माया गर्छन्, तर यो हाम्रो लागि होइन। जो पनि रोमान्टिक कथाहरू पेरिसका थिए, उनीहरू सबै प्रागमा बसिरहेका छन्, हाहा।
म पेरिसमा बिताएको सायद तपाईंले पेरिसको अनुभव बिना नै वर्णन गर्नुभएन, हुनसक्छ किनकि म भीड र पर्यटक स्थलबाट बच्न सक्छु।
हुन सक्छ, दाऊद। यो मजाकिया छ, पेरिस ती ठाउँहरू मध्ये एक हो जहाँ मान्छे पनि मन पर्छ वा धेरै माया गर्दैन ... मलाई निश्चित छ कि हामी यसलाई केही बिन्दुमा अर्को मौका दिनेछौं!
मैले पहिले नै फ्रान्सेली भ्रमण गरेको छु तर म अझै पनि मोनालिसा देख्न सक्दिनँ, 🙁 बृद्धिमा लेखमा, मलाई थाहा छैन कि म बिना अचम्मको सुझावहरू कसरी यात्रा गर्नेछु।
ईमानदार हुन, जुली, यो हेर्न को लागी राम्रो छ, तर यो वास्तवमा आश्चर्यजनक छैन। सैकड़ों मानिसहरू घेरिएको छ, र वास्तवमा धेरै सानो छ। हामी शायद त्यहाँ एक मिनेट बिताई, पेंटिंग को सामने, प्रायः।
वास्तवमा? फोटोमा यो देखिन्छ कि यो रिक्त छ, उत्तरको लागि धन्यवाद, म धेरै काम गर्छु र छुट्टिको मज्जा लिनको लागि मलाई आराम स्थानहरू खोज्नुपर्छ, मलाई तपाईको ब्लग, बधाई छ। मैले पहिले नै साइन अप गरेको छु।
अगस्ट 25, 2018
यो सूची दिनको लागि धन्यवाद यो मेरो लागि धेरै सहयोगी छ र मैले जाँच गरे सबै सङ्कलन हो। यदि तपाइँ एयरलाइन्सका लागि उडान टिकट बुक गर्न चाहानुहुन्छ भने मात्र फ्रन्टियर एयरलाइन्स सम्पर्क नम्बर डायल गर्नुहोस् + 1-800-874-8529